Safaarada Mareykanka ee Nairobi oo la xiray iyo waqtiga dib loo furi doonno oo la shaaciyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Safaarada Mareykanka ee Nairobi oo la xiray iyo waqtiga dib loo furi doonno oo la shaaciyay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa sheegaya in maanta ay gebi ahaanba xiran tahay safaaradda Mareykanka iyo sidoo kale qeybteeda qunsuliyadda ay ku leedahay magaaladaas.
Xiritaanka safaarada Mareykanka ayaa ka dambeysay, kadib markii maalintii shalay halkaasi lagu toogtay nin mindi ku hubeysan oo weerar kusoo qaaday askarta ilaaladda ka aheyd safaaradda.
War-qoraal ah oo ay safaaradda ku baahisay barteeda Internetka ayaa lagu sheegay in hakad la geliyay dhamaan howlaha shaqo ee ka socday safaaradda islamarkaana dib loo howlgalin doonno maalinta isniinta ah ee ku beegan 31-ka bishaan October.
Ninkii shalay mindida ku weeraray safaaradda Mareykanka ayaa deegaan ahaan kasoo jeeda degmada Wajeer ee gobolka W/Bari Kenya, wuxuuna doonayay inuu safaaradaasi si xoog ah ku galo, balse uu is-hortaag ku sameeyay mid ka mid ah askarti ilaalada ka haysay safaaradda.
Askariga is-hortaaga ku sameeyay ninkaasi ayaa weerarkasi ku dhaawacmay, waxaana dhaawaciisa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Ciidanka ilaalada ka ahayd safaaradda Mareykanka ayaa ugu dambeyn toogtay ninka weerarka kusoo qaaday halkaasi, waxaana weli socda baaritaano ku aadan sababta ka keentay in ninkaasi uu weerar kusoo qaado safaarada.
Dhinaca kale, mas’uuliyiinta ku sugan safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi aanay waxyeelo kasoo gaarin shaqaalahooda, marka laga reebo ninka askariga ah oo mindida lagu dhaawacay.